”Haddii aad Soomaali tahay markiiba waa lagu nacayaa!” – Dukaan ku yaalla Minneapolis oo xaalad adag wajahaya & ceebo kusoo baxay! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Haddii aad Soomaali tahay markiiba waa lagu nacayaa!” – Dukaan ku yaalla...
”Haddii aad Soomaali tahay markiiba waa lagu nacayaa!” – Dukaan ku yaalla Minneapolis oo xaalad adag wajahaya & ceebo kusoo baxay!
(Minneapolis, MIN) 06 Juun 2020 – Holy Land, oo ah makhaayad iyo dukaan cunto oo laga adeegto kuna yaalla Minneapolis, ayaa qaaddacaad wajahaya kaddib markii ay soo mudheen faallooyin isir faquuq ah oo ay samaysay gabar uu dhalay odayga meheradda iska leh.
Odayga Majdi Wadi ayaa shaqada ka cayriyey gabadhiisa Lianne Wadi — oo meesha maareeye ka ahayd — kaddib markii ay soo bexeen tweet-yo midab takoor ah oo ay samaysay 2012-kii, iyo faallooyin kale oo ay soo dhigtay Instagram 2016-kii.
Odayga oo qoraal soo geliyey Facebook, ayaa ku dooday in gabadhiisa Lianne, 23-jir, ay dhoocil soo baxaysa ahayd xilligii ay waxan samaynaysey, sidaa darteed, aanay “si sax ah uga tarjumayn cidda ay hadda tahay qof ahaan”, isagoo sheegay inay hadda u ololeeyso dadka midabka leh.
Lianne Wadi oo Khamiistii raalli gelin kusoo qortay Instagram ayaa bixisay marmarsiinyo cajiib ah oo u eg sheekadii Soomaaliga ahayd ee ”yaa gacantayda ku cunay!”, iyadoo sheegtay inay “la yaabban tahay inay waxan oo dulmi ah iyadu qortay.”
MAXAY QORTAY? Lianne Wadi ayaa tweet-yo badan samaysay 2012-kii, kuwaasoo ay si joogto ah ugu gefeeyso Soomaalida, Yuhuudda, dadka madoow guud ahaan iyo xitaa kuwa buurbuuran.
“#Wuxuu Dugsiga Sare i Baray in haddii aad Soomaali tahay si otomaatig ah laguu nacayo<3.” ayuu mid u qornaa.
”3-da isir ee ugu horreeya ee aan dunida ka dabar-goyn lahaa waxay kala yihiin: Yuhuudda, Madowga, iyo dadka buurbuuran.”
“#Haddii aan Madaxwayne ahay waxaan dhamaystiri lahaa shaqadii uu Hitler bilaabay, dunidana waan xukumi lahaa,” ayay Lianne Wadi ku tiri tweet kale.
Dadka ayaa haatan wacad ku maray inaysan wax dambe ka iibsan doonin halkaasi, iyadoo la sheegay inuu odayga laftiisu caayo Soomaalida u shaqeeysa iyo kuwa wax ka iibsada.
Dhanka Instagram, Saria Baker oo sheegtay inay qoyskeeduu 15 sano dukaankaa wax ka iibsanayeen ayaa ballan qaadday inaysan dib dambe u hor istaagi doonin, iyada oo liis garaysay dukaamo ay madowgu leeyihiin oo laga helo raashin xalaal ah.
“Waxaan si cad u xusuustaa sida kala duwan ee loola dhaqmi jirey Soomaalida, Mexican-ka iyo Carabta halkaa ka shaqeeysa,” ayuu yiri nin halkaa ka shaqayn jirey.
“Waxaan xusuustaa milkiilaha oo aflagaaddaynaya shaqaalaha Soomaalida ah.” ayuu raaciyey.
Farriintan ayaa kusoo aaddey xilli laga dibed baxayo dilkii George Floyd oo ku dhintay koonfurta Minneapolis, kaasoo ay laftiisa Booliiska ugu yeereen dukaanleey Carab ah.
Previous articleHindise sharciyeedyada lagu eegi doono kalfadhiga Baarlamanka oo ay ku jiraan kuwo xasaasi ah (Muqdisho & Somaliland oo ka mid ah)
Next articleFal ay samayn jireen oo laga mamnuucay Booliiska & arrin cusub oo lagu waajibiyey (Haddii aad tahay Soomaalida Minneapolis fadlan akhri)